Abakhiqizi bensimbi engagqwali nabathengisi | Angeza
Isibambo sensimbi esingenasici siyinto ebalulekile yefenisha yokuhlobisa ifenisha, elula yokuvula umnyango wekhabethe nekhabethe ngokukhululeka. Ezigcawini eziningi, mhlawumbe ucabanga ukuthi idlala indima encane. Kodwa-ke, isibambo esisha ungasiza iminyango yakho, amakhabethe, amawadi abukeka okusha.
I-adduth izikhali zensimbi ezingenasici zingukukhetha kwakho okuyinhloko. I-assortment yethu yezandla ifaka izinhlobo ezahlukahlukene ezahlukahlukene: izibambo zensimbi, izibambo zensimbi ezingenasici, izibambo zepulasitiki, njll. Sine-handles ehlukahlukene futhi ecebile, ukuhlinzeka ngezinhlobo ezahlukahlukene zezibambo nezibambo zezimpande ezahlukahlukene Hlangana nezidingo zakho. Yonke imikhiqizo yethu iye yahlola ukuhlolwa okuqinile kwe-SGS, futhi isibambo ngasinye senzelwe ukuhlolwa kwekhwalithi okuqinile.
I-Addyless yensimbi engenasici inganikeza inani lakho elizuzisa kakhulu ngekhwalithi ephezulu edlula ukuhlolwa kwekhwalithi okuqinile futhi ikulethela wena namakhasimende akho okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu.
Isengezo Izibambo zensimbi ezingenasici ezikhiqizwe ngensimbi ephezulu engagqwali njengento eluhlaza, ukwelashwa okuhle, okwenza kube bushelelezi nokwenza ngcono amandla okulwa nomoya wokufafaza usawoti. Isitayela sokuqamba sisinamuhla, silula futhi siqinile, futhi singasetshenziswa ezitatshelweni ezahlukahlukene zefenisha, hhayi likhawulelwe ngesitayela somhlobiso.
Imibala ehlukahlukene ingahle ibekwe ngokwezifiso njengokuthandwa kwamakhasimende, imibala eminingi ongayikhetha, njenge-SSS / PSS / PVD / AB. Izinhlobo ezahlukahlukene zosayizi abahlukahlukene zamadayimane wepayipi bese ubeka isikhala sokukhetha kwakho. Isicelo se-Multi-Scene, elungele ukusetshenziswa kakhulu kwefenisha enjengamawadi, amabhuku. Sekela ukwenza ngokwezifiso okukhethekile, kungahambisana nekhasimende'Ibanga lomgodi, umbala, usayizi weZinga, ukukhiqizwa kwamamodeli wangokwezifiso wokubamba isibambo.